भागरथी हत्यामा नयाँ ट्विस्ट, यसरी छले संदिग्धले प्रहरीलाई… « Ok Janata Newsportal
भागरथी हत्यामा नयाँ ट्विस्ट, यसरी छले संदिग्धले प्रहरीलाई…
काठमाडौं । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले क्लोज रिङमार्फत् अभियुक्तको नजिक पुगेको जनाएको छ ।
घटनास्थलमा यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदी आफै खटेका छन् । उनले हत्यारालाई पत्ता लगाउन भरपुर प्रयत्न गरेका छन् । काठमाडौंमा हुँदा पनि प्रहरी युनिटमा राम्रो छबि बनाएका सुवेदीलाई यो घटनाले थप बलियो बनाउने छ । जसरी पनि हत्यारा पत्ता लगाउनु उनका लागि दबाब छ ।
तलको समाचार पढ्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोला
भागरथी हत्याकाण्ड : महेन्द्रनगरबाट भारततर्फ लागेका यी व्यक्ति पक्राउ !
शनिबारमात्रै प्रहरीले एकजना संदिग्धलाई कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरेको छ । उनी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेको प्रहरीको भनाइ छ । यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने भन्दै पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम खुलाएको छैन ।
भागरथी विद्यालयबाट घर फर्केकै दिन ती व्यक्ति पनि त्यहाँबाट निस्केको प्रहरीले प्रमाण फेला पारेको छ । उनको चालचलन पनि घटनापछि फरक देखिएको प्रहरी दाबी छ । शंकामा रहेका ती व्यक्ति शनिबार नै भारततर्फ जाने प्रयास गरिरहेका थिए ।
भागरथी हत्यामा यी शिक्षकदेखि सरकारी कर्मचारीसम्म शंकाको घेरामा !
प्रहरी घटनाको नजिक पुगिसकेकोले कसैलाई नआत्तिन भनेको छ ।